Izindaba - Ungayilungisa Kanjani Ivelu Yenjini Yemoto?
Izingxenye zezimoto injini valve imvelo yokusebenza inokhahlo, ukuthintana ngqo negesi, izinga lokushisa eliphakeme le-valve yokukhipha lingafinyelela ku-800 ℃, futhi ekugcineni komjikelezo wokuthambisa, kuhlanganiswe nomsebenzi we-valve lapho isenzo sokuvula nokuvala siba kaningi, izingxenye ze-valve Kulula kakhulu ukukhiqiza umonakalo. Ngakho-ke, kufanele kubhekwe izingxenye ze-valve zokulungiswa kabusha, ukuqinisekisa ukuthi kusesimweni esivamile sokusebenza.
1. Valve ukuhlolwa nokulungiswa
(1) Hlola ukugobeka kwekhanda le-valve nesiqu. Lapho isiphetho sesiqu se-valve sikhubazekile noma sigugile, lungisa, futhi inani lokulungisa kufanele libe inani eliphansi. Gaya ubuso be-valve.
(2) Faka esikhundleni i-valve uma ubukhulu be- injini yemoto ingaphansi kwenani lomkhawulo. Lapho usevisa, hlola ukuphela kwesiqu ngasinye se-valve ukuphambuka, ukugqoka nokugoba.
(3) Bheka indawo yokusebenza nesiqu se-valve ngayinye ukuthi ayigqoki yini, ishe noma i-deformation, bese uyishintsha uma kunesidingo.
(4) Sebenzisa umkhawulo we-valve stem end deflection: 0.1mm ye-valve yokudla, i-0.1mm ye-valve yokukhipha; inani elijwayelekile lokuqina kwekhanda le-valve: i-1.0mn ye-valve yokudla, i-1.5mm ye-valve yokukhipha; umkhawulo wokusetshenziswa: i-0.7mm ye-valve yokudla, i-1.0mm ye-valve yokukhipha.
(5) Sebenzisa i-micrometer ne-V-frame ukukala ukugoba kwesiqu se-valve. Isiqu se-valve sisekelwa kuma-V-ozimele amabili ebangeni elingu-100 mm, bese ukugoba kukalwa ku-1/2 wobude be-valve nge-micrometer. Uma umkhawulo ovumelekile weqiwe, kufanele ulungiswe ngomshini wezandla.
2. Ukususwa kwenhlangano ye-valve
Ngemuva kokuthi isitimela se-valve sihlanganisiwe, intwasahlobo isesimweni esigcwele ukulayishwa, uma ihlukaniswe ngokungafanele, intwasahlobo izophuma futhi ilimaze umzimba womuntu, ngakho-ke, kuyadingeka ukusebenzisa i-valve ekhethekile yasentwasahlobo yokuqaqa ukwenza umsebenzi ojwayelekile lapho uqaqa isitimela se-valve, ukuze kuqinisekiswe ukuhlukaniswa okuphephile kwezingxenye zezimoto ze-valve isitimela. Isiphathi sentwasahlobo sicindezelwa phansi nentwasahlobo efakwe kusengaphambili ngesisusi sentwasahlobo ukuze iphini yokukhiya imahhala futhi isuswe kalula. Isiphathi sentwasahlobo bese sithanjiswa kancane kancane kanye nentwasahlobo kuze kube intwasahlobo isesimweni esikhululekile ngokuphelele.
3.Ukushintsha i-Valve Seat Coils
Ubuso obusebenzayo besihlalo se-valve buya buthaka kancane ngemuva kokuphinda usebenze kabusha noma ukugaya, okuthinta ukubambisana okujwayelekile phakathi kwe-valve nesihlalo. Uma indawo yokusebenza yesihlalo se-valve ingu-1.5mm ngaphansi kwendawo yesihlalo se-valve, kufanele kufakwe ikhola yesihlalo se-valve. mm, kufanele kufakwe ikhola yesihlalo se-valve. Indlela yokumiselela: sebenzisa amathuluzi akhethekile ukukhipha ukhololo wakudala wesihlalo, bese ufaka ukhololo omusha wesihlalo onokuphazamiseka okungu-0. 0.75 ~ 0. 125 mm nembobo yesihlalo ethangeni lamanzi we-nitrogen abandayo ancipha ngo-15 ~ 20 s. I-Afters icindezelwe esihlalweni sembobo yekhanda lesilinda ukuze ishise ekamelweni lokushisa. Ngenye indlela, fudumeza imbobo yesihlalo senhloko yesilinda ibe cishe ku-100 ° C nge-blowtorch noma ngethoshi legesi (umkhuba onamandla: ngaphambi kokushisa ikhanda lesilinda, faka impuphu emhlophe yomchilo ezungeze imbobo yesihlalo, bese uyishisa ibe cishe ngo-100 ° C lapho impuphu emhlophe iba phuzi), bese ushaya indandatho yesihlalo ngokushesha bese uyipholisa emoyeni.